Fandinihana ny Soratra Masina
Accueil Ny Mpitandrina Fampianarana Fandinihana ny Soratra Masina
Publication : 27 octobre 2004
Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika fa tontosa soa aman-tsara ny fiaraha-madinika ny Soratra Masina tamin’ny Zoma 22 Oktobra 2004 lasa teo. Niompana indrindra tamin’ny lohahevitra hoe :
" Andriamanitra, manasitrana, manafaka ary mamonjy izao tontolo izao "
,izay notsoahana avy tao amin’ny Bokin’ny Isaia 42 :1-12 ;49 :1-6 ;50 :4-9 ;52 :13-53 :12. Ny fahoriana sy ny fijalian’ny Mpanompon’i Jehovah no nampihavana antsika tamin’Andriamanitra ka nahitantsika fitsaharana sy nahazoantsika fanasitranana.Ary raha ny olona izay nantsoina tamin’ny anaran’i Jehovah no ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hibebaka ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Andriamanitra ka hamela ny helony ary hanasitrana ny taniny ( II Tantara 7 :14). Tafiditra amin’ny fanatanterahana ny Soritr’Asam-Piangonana izy ity sy ny Firehana Teolojikan’ny FPMA rahateo.
Ny fanohizana ny fiaraha-madinika ny Soratra Masina moa dia mbola hitohy any amin’ny lasy izay hataon’ny Tafo Melun amin’ny faha 20 sy 21 Novambra ho avy izao.